5PM: I-SaaS yoLawulo lweProjekthi epheleleyo Martech Zone
NgeCawa, ngoMatshi 23, 2008 NgoMgqibelo, Oktobha 25, 2014 Douglas Karr
Omnye wemiceli mngeni yokuba neqela eliphuma ngaphandle okanye elaselunxwemeni lizama nje ukulandela umkhondo kunye nokubeka phambili umsebenzi wakho. Ndisebenza ngaphandle kwezixhobo ezikhutshelwa ngaphandle ezintathu, enye yazo elunxwemeni. Kubonakala ngathi xa wahlulahlula usuku lomsebenzi phakathi kwemida yamaxesha, ngokwendalo wazisa ukulibaziseka kuyo yonke into oyenzayo.
Ndifumene umshicileli xa irhoxisiwe Basecamp kunyaka ophelileyo. Isimanga kukuba, xa ndatyikitya umsebenzi wam omtsha, ndandibuyele emsebenzini ndisebenza eBasecamp kwakhona. Andinkqonkqozi Basecamp, sisicelo esifanelekileyo. Ndidinga into enomsebenzi owomeleleyo kunye nolawulo lwexesha. Ndenza ngoko, kwaye ndifumanisa ukuba ndisenza ngoku. Ibhodi yeengxoxo enoluhlu olulula lokwenza nje ayinqumli njengesicelo solawulo lweprojekthi.
Andazi ukuba uSergei Podbereschi noGreg Roy (abasunguli be Ulawulo lweProjekthi ye5PM isoftware) eyakhe yasebenzisa i-Basecamp, kodwa ngokuqinisekileyo banamava eminye imiba efanayo endizifumana ndikuyo namhlanje nenkampani yabo, Isoftware yeQG.
Ke-babeka iintloko zabo kunye kwaye bakhula 5PM. Esi sicelo, ngokumangalisayo, saphuhliswa kumazwekazi amabini ahlukeneyo kwiilwimi ezi-5 ezahlukeneyo ezithethwa ngabasebenzi (ngoku) abathandathu.
Emva kokubona umboniso we5PM, ndadibana noSergei. Nantsi indlela i-5PM ifike ngayo:
Yaphuhliswa uninzi lwezisombululo zolawulo lweprojekthi-ngaphandle kwemfuno. Kwabuyela ngo-2003 xa sasiqala kwaye kwakungekho nto ngaphandle apho sasiyithanda. Ke siqale ngokwethu sayibiza ngokuba yiProjekthi noMlawuli weQela. Ngapha koko, olo hlobo lokuqala lwaphuhliswa ndim, emva koko saqesha iikhowudi ezongezelelweyo ukuze sizongeze. I-5pm ikhule ukusuka kwimveliso yokuqala. Yiyo yonke i-web20, kodwa, njengoko ubona, isekwe kwizimvo ezindala kakhulu. I-5pm enyanisweni yayiyilo ngokutsha. Yonke into itshintshile- ukusuka kwiqonga lophuhliso kunye nokujongana nokubekwa uphawu. Sayisungula ngoNovemba 2007, njengoko SaaS (Uhlobo lwangaphambili lwalunokukhutshelwa).
Ndicinga ukuba kuthatha ujongo olunye ukubona ukuba yahluke njani. Khange sisike iikona xa kuyilwa ujongano. Sifuna yonke into ngaphakathi konqakrazo okanye ezimbini kunye nokubanakho ukwenza ngokwezifiso ujongano. Kuze kuza neXesha leXesha leFlash (andazi nayiphi na isoftware yolawulo lweprojekthi exuba iAJAX kunye neFlash kunye).
Sinendlela eyahlukileyo yokunxibelelana kunye neempawu-sizama ukuyenza ilula ngaphezulu ngelixa sipakisha amandla amaninzi "phantsi kwehod". Kwakhona, u-5pm sisiphumo somdibaniso onomdla wemibono-uGreg ngumphathi we-IT onamava eminyaka eli-15, ngelixa ndingumyili wewebhu omncinci kunye nomphuhlisi. Abaphathi bathanda umbono ocacileyo kunye neengxelo. Abaphuhlisi bacaphukela izixhobo zolawulo lweprojekthi, ngokusisiseko. Ke sizamile ukuyila ujongano apho kulula ukuba amalungu eqela ongeze imiyalezo okanye avale umsebenzi ngonqakrazo olunye (nkqu nge-imeyile), ngelixa abaphathi banamandla okumba nzulu.
Ndicinga ukuba siza kwahlula ngakumbi njengoko sisongeza amanqaku, sisebenzisa ingxelo evela kubaxhasi bethu. Lindela utshintsho olukhulu kwicandelo lethu lexesha kunye neeNgxelo kwiinyanga ezizayo.
Ndicelile uphononongo lwamaqabane ethu ophuhliso ngo-5PM kwangoko. Iqela belijonga Jira, kodwa ujongano luyadida ngokunyanisekileyo kum. Ndiyathemba ukuba ndiza kudubula ngokusebenzisa i-5PM!
Okwakho I-Office Space buffs phaya, uyakuyixabisa idemo. Kwanele ngoku.
tags: 5pmulawulo lweprokjekthiii-saasulawulo lweprojekthi olulaisoftware njengesisombululo
I-Starbucks isungula iNethiwekhi yeNtlalontle
Mar 24, 2008 ngo-1: 28 AM
Ndiyayithanda imbonakalo entle kakhulu kwaye inomdla kakhulu. Ndizama ngoku (uvavanyo lweentsuku ezili-14 zasimahla). Masibone!
Mar 24, 2008 ngo-2: 27 AM
Ndifunde nje iposti yakho kwaye kuba ujonga isixhobo esifanelekileyo solawulo lweprojekthi ndikucebisa ngamandla ukuba ujonge ngaphezulu ProjectOffice.net. Isisombululo esisekwe ngokuhlwa esibonelela ngexesha elifanelekileyo lokucwangciswa kunye nolawulo lweendleko, i-wikis kunye nokulandela umkhondo.
Ndiyakholelwa ukuba uyakuyithanda.
Ke, zama kwaye undazise amava akho.
Mar 24, 2008 ngo-9: 49 AM
Yintoni, ngaba ngabafana be-5PM abavela e-Indiana?!? 😉
Ukudlala. Ndijonge nje i-5PM kwaye, ngaphezulu, ijongeka intle!
Mar 24, 2008 ngo-10: 00 AM
Ha! Hayi - kodwa basondele… eOhio;).
Emva kokujonga isicelo bendimpompozwe kwaye ndifuna ukubhala malunga naso. Ngokukodwa kuba ndingakhange ndibone kubhaliwe ngayo nayiphi na enye indawo kwi-intanethi. Ukukhangelwa kwezinye iiblogi akubanga nanto kwaye uSergei wenza 'udliwanondlebe' nge-imeyile.
Ixesha belilihle kakhulu- kuba siyasokola kule micimbi yolawulo emsebenzini wam ngoku.